Ndiani Akapinza Wheelchair Ramp | Karman® Mawiricheya
The wiricheya ramp haina kugadzirwa nemunhu mumwe. Ichi chishandiso chekushandisa chakashanduka kuita zvazviri nhasi nekufamba kwenguva mushure memakore e kushaya hurema.
Ramp seVanhu Vanofamba
Ramp ave aripo kubva kuGirisi yekare. Yakagadzirwazve senzira yekufambisa vanhu muma1900 panguva yekugadzirwa kwe New York's Grand Central Station. Yaizivikanwa senzvimbo huru isina masitepisi. Nekudaro, pakutanga zvaiitirwa vanhu vakatakura mukwende, vakadzi vane vanofamba-famba, uye vanhu vazhinji.
Vanhu vakaremara vaiwanzo kukosheswa nesosaiti, asi zvakatozosvika makore makumi mana nemakumi mashanu apo mafungiro aya akatanga kuchinja. Mushure meHondo Yenyika 40, veterans vazhinji vakadzoka ne kufamba-kukuvara kwakabatana. Aya mavetera akasangana nematambudziko mazhinji ezuva nezuva kubva pamatanhatu-masendimita emigwagwa yemigwagwa kuenda kune zvivakwa zvaisakwanisika.
Varatidziri vakatora migwagwa muma1950s nema60s ndokupwanya migwagwa senzira yekuvawedzera wiricheya inowanikwa. Kuremara kuita zvechisimba hakuna kuganhurirwa kune veterans chete, kunyangwe hazvo vakaita basa rakakura. Kune vamwe vazhinji vairatidzira kufambidzana nzvimbo, kunyanya mukati medhorobha nzvimbo.
Rehabilitation Mutemo / ADA
Kuremara vanoita zvematongerwo enyika vakakoka kongiresi muma 70s uye muna 1973 mutemo weRehabilitation Act wakapasiswa, kuchengetedza kodzero dzevanhu vakaremara. Zvakangodaro, kwaive kusati kwaitika kupfuura kwevaAmerican vane Disability Act, kana ADA, muna 1990 kuti iyo wheelchair ramp yakave yakakosha mumagadzira dhizaini. Zvino, mabhizinesi nenzvimbo dzeveruzhinji ndizvo kunodiwa kupa pekugara vanhu vakaremara.
Wiricheya ramp nhasi
Nhasi kune misiyano mizhinji kune iyo wiricheya ramp. Isu tava nekutakurika Ramp izvo zvinogona kufambiswa zviri nyore kubva kune imwe nzvimbo kuenda pane imwe. Iko kune semi-zvachose ramp iyo yakagadzirirwa kuve yakasimba mukushandisa kwenguva refu asi inogona kutamiswa. Uyezve kune iyo yekusingaperi ramp izvo zvinogona kugadzirwa kubva pamatanda, aluminium uye zvechokwadi kongiri.
Wiricheya ramp haigone kuverengerwa kumunhu mumwe chete. Nhoroondo yakatiratidza izvo vanoita zvekuremara akarwira iyo wiricheya ramp izvo zvatinoziva nhasi. Iyo ramp yakakwidziridzwa kubva kune yakapusa ndege yakada kutanga yairehwa kutakura zvinhu kune chishandiso chekuwanika. Asi, pachine basa rinofanira kuitwa kuti riwanikwe munzvimbo dzeruzhinji. Kuwanika ikodzero, kwete mukana.
kupinda Izvi re muna Mawiricheya asingaremi, Retail, Time Machine, hwiricheya, Wiricheya Nhau uye tagged wiricheya, nhau dzewiricheya, mavhiripu.